Ukuveliswa kweentsimbi zeentsimbi ezigqwesileyo kunye nabenzi bentsingiselo yesinyithi UAlice
Abathengi abasuka kwisiko le-UAE benziwe i-500pcs yeAluminum Names Alfates kwi-US-Alice
Umthengi ovela kwi-United Arab yase-Arab yase-Arab i-50 000 ye-PCSUMUM ALTIONAM ALTIFET kuthi. Lo mthengi wasiqhagamshelana kwaye wasinika i-imeyile yegama lakhe, kwaye sawugqiba isampulu yokufakwa kwegama kwiveki ngokwemizobo yomthengi. I-Allow Nationate Gxinisa abathengi ngenkxaso yabo kunye nentembelo yabo.
Yintoni omele uyenze ukuba i-faux heskskin lamphade ijika i-alice-alice
Yintoni endifanele ndiyenze ukuba i-faux heskskin lamphade ijika ityheli? Nazi iindlela ezimbalwa zokukunceda.1. I-Bliach nge-Sulfur i-Sulfure. Skriza ngebrashi.2. Misela igumbi lokutshaya ekhaya.3. Abavelisi be-lampkede abavelisi. Ngokubanzi, iLamphade ineoyile ekhethekileyo enokucocwa. Ungayithenga ngqo kumvelisi oyithengileyo!
Umthengi ovela eJamani owenza i-audio ihlebeziwe kwi-60,000 ye-PCSUMAM ALTIONAM ALTIONAM ALTIONAM KWI-US-Ali
Umthengi ovela eJamani ovelise i-audio ihlebeziwe ngaphezulu kwamagama angama-60,000 eeplanethi. Namhlanje, amagama omthengi anikezelwe kwiJamani kwiibatch. Eli lixesha lesibini labathengi abaseJamani ukuze basebenzisane nathi. Enkosi ngenkxaso yakho kunye nentembeko yakho.
Indlela yokujongana netyheli yeplastiki yaseLapyshade-Alice
Zonke iintsapho ziya kufaka iintlobo ezahlukeneyo zeemveliso zokukhanyisa. Ukwenzela ukuba ukukhanya kube nefuthe elingcono lokuhombisa, kungokwemvelo ukukhetha ukufaka iLampshade, kwaye kungasikhusela isibane eluthulini. I-Lamphade isenokucocwa. Zininzi iintlobo zezixhobo zeLamphade, kwaye iplastiki yeplastiki inye kuphela kuzo. Emva kwexesha elide lokusetyenziswa, abantu banokufumanisa ukuba ijika ityheli, ke indlela yokujongana nokutyholoza kweplastiki?
Zithini izakhono zokuthenga ezijikeleze iLamphade-Alice
Ukuthengwa komjikelo weLampshade, kuyacetyiswa ukuba wonke umntu anikele ingqalelo kwintengiso eqhelekileyo, nikela ingqalelo kwinkangeleko, kwaye ukhethe ngokwendlela yokuhombisa usapho. Oku kungasentla kukwazisa indlela yokufaka i-lampshade yeLampshade kunye nezakhono zokuthenga zeLamphade zeLamphade. Ungayikhetha iZibane ezifanelekileyo ezifanelekileyo ngokweemfuno zakho.
Ungayifaka njani i-Lampshade-Alice-Alice
Ngexesha lokufakwa kweLampshade yeLapshade, i-bolts yokwandiswa isetyenziselwa ukulungisa, kwaye inani kunye nobungakanani beebhloko zokwandisa zimiselwa ngokwesitayela kunye nesikhululo sesetyhula esilindayo sesetyhula. Kwinkqubo yokutshintsha isibane sesetyhula esilindayo, kuyimfuneko ukwazi inani kunye nezikhundla ezithile ze-bolts ezisetyenzisiweyo, ezinokuthintela ngokufanelekileyo iingxaki ezingeyomfuneko ekutshintsheni i-bulb.
Ungawususa njani umthunzi odibeneyo we-Lamp-Alice-Alice
Emva kokuba kugqityiwe ukuqhwatywa okudibeneyo, kuyimfuneko ukungenela umhombiso wezibane zekhaya. Isibane esidibeneyo se-phaish sisikhethe esiqhelekileyo. Emva koko, emva kokuba kufakwe ulahleko, ukuba kukho impazamo, ukuba ungayisusa njani isibane esidibeneyo sesibane?
Ungayifaka njani i-phamp edibeneyo ye-Lamp-Alice
1. Ukufaka izibane ezidibeneyo ezidibeneyo ngaphakathi, kufuneka uqale indawo. Kucetyiswa ukukhetha indawo kunye nomoya olungileyo.2. Jonga umgangatho wodonga lwegumbi lokuphila ngokwalo lokuthintela ukuthambisa udonga nodonga ngexesha lokufakwa kokudityaniswa kwesibane esidibeneyo.3. Jonga umgangatho we-phariling wendawo apho kuya kufakwa khona ukukhanya okudibeneyo. Ukuba uziva ngathi awukhuselekanga ngokwaneleyo, kuyacetyiswa ukuba usebenzise i-skeon skeon skeleton njengenyathelo lokukhusela kwisilingi.
Indlela yokuBala Kali-Lamphade kunye ne-Aliesieliry
Isibane esihle sinokuba ngumphefumlo wokuhonjiswa kwekhaya, kwaye ukhetho lokukhanya lubalulekile ekuhlolweni kwekhaya. Eyona ngongoma iphambili yokukhetha ukukhanya kophahlandlela kukubona ukuba kulula ukuyifaka kwaye kuyacaca, kwaye kuya kufuneka icocwe. Kwinkqubo yokucoca yemihla ngemihla, iya kusindisa inkathazo enkulu, kwaye ilungele ukuyibuyisela kwakhona kwixesha elizayo.
Ungayivula njani iLampshade ejikelezayo yokujikeleza kweLample-Alisi
Isibane esijikelezayo sivulwa ngokubanzi ngokujikeleza iLampshade; Uhlobo lwesikwere ngokubanzi usebenzisa ibhulukhwe; Kukho ukuthelekisa iglasi ye-lamptade, egutyungelwe yimithombo emithathu ngaphakathi, kwaye iLampshade kufuneka ikhutshelwe kanzima; Ezinye izibane ze-phams zinamathele kwisilingi, kwaye i-gusser esecaleni kufuneka isuswe ukuze ithathe indawo yayo. Tsala iLampshade ukuze ubone imithombo, cinezela omnye wemithombo ngesandla kwaye uyikhuphe, emva koko uyeke eminye imithombo.
Ungayisusa njani i-lampshade kwi-olie
Ukukhanyisa liso ngefenitshala. Kumhlobiso wasekhaya, indima yeLamps ayinamda kuphela wokukhanyisa, kodwa idlala indima yokuhombisa.
Indlela yokujongana neLamphade ye-LAPHSHADE EKHAYA? -Ai
Xa ukhetha izibane kunye nezibane, uninzi lwexesha, wonke umntu uza kujonga izibane ezinkulu kuqala, kodwa ngamanye amaxesha izibane ezinkulu azisebenzi njengezibane ezincinci. Nangona izibane ezincinci azikho kangako ngokwemigaqo, iziphumo zabo zokukhanyisa zilungele kakhulu ikhaya, kwaye ngoku izibane zingaphumi kuphela kokukhetha i-aesthetics, kodwa zaphucula isigqubuthelo sezibane.